त्रिवि उपकुलपति पद बिहीबारदेखि रिक्त हुँदै, प्रधानमन्त्रीबाटै नाम कुर्दै सर्च कमिटी - Everest Dainik - News from Nepal
त्रिवि उपकुलपति पद बिहीबारदेखि रिक्त हुँदै, प्रधानमन्त्रीबाटै नाम कुर्दै सर्च कमिटी
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँको कार्यकाल बिहीबारदेखि सकिँदै छ । तर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित सर्च कमिटीले अहिलेसम्म भावी उपकुलपतिको नाम प्रस्ताव गर्न सकेको छैन ।
कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपकुलपतिको नाम प्रस्ताव गर्न शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा डिल्लीराज शर्मा र कमल गुरागाईं सदस्य रहेको कमिटी गठन गरेका थिए । तर, पहिलोपटक दिएको समयमा कमिटीले काम गर्न नसकेपछि एक हप्ता अवधि थप भएको थियो । पछिल्लोपटक थपिएको समय पनि बिहीबार नै सकिँदै छ ।
याे पनि पढ्नुस त्रिवि उपकुलपतिमा डा. बाँस्कोटा नियुक्त
उपकुलपति बन्न धेरै प्राध्यापकको दौडधुप छ । सर्च कमिटी प्रधानमन्त्रीबाटै उपकुलपतिको नाम आउने अपेक्षा गरेर बसेको छ । ‘बैठक बस्ने समयसम्म प्रधानमन्त्रीबाट नाम आउन सक्छ, त्यही नाम कमिटिले सिफारिस गर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । कमिटीको बैठक बुधबार साँझ बस्दै छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री एउटै पार्टीको भएकाले प्रधानमन्त्रीले दिने नाम नै कमिटीले सिफारिस गर्ने स्रोतको भनाइ छ । छनोटको विधि नतोकिएकाले माथिबाट आउने नाम नै सिफारिस गर्ने सर्च कमिटिका एक सदस्यले बताए ।
सर्च कमिटी सदस्य प्रा।डा। डिल्लीराज शर्माले त्रिविको उपकुलपतिका लागि छलफल भइरहेको बताए । पहिले प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहँदा र छलफलका लागि समय अभाव हुँदा समयमै नाम सिफारिस गर्न नसकेको उनको दाबी छ । तर, पछिल्लोपटक थप भएको समयभित्र नाम सिफारिस गर्ने बताए ।
अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति पद पनि रिक्त हुँदै
एक महिनापछि अन्य विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति पद रिक्त हुँदै छन् । नेपाल संस्कृत, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, कृषि तथा वनविज्ञान, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति पद असोजसम्ममा रिक्त हुँदै छन् । राजनीतिक भागबन्डाले विश्वविद्यालयमा बेथिति भएको भन्दै सक्षम व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने सरोरकावालाले सुझाब दिइररहेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: त्रिवि उपकुलपति
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू, यी विषयमा हुँदैछ छलफल
को हुन् कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने दशौं व्यक्ति ?
आज एकै दिन ३३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
२ सय ९० संक्रमितले जिते कोरोना, कुन प्रदेशमा कति डिस्चार्ज ? (सूचीसहित)
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठको सरुवा